Naharitra adiny roa mahery vao voafehy ny afo na dia niezaka mafy aza ny mpamonjy voina. Tsy nisy na inona na inona azo noraosina intsony taorian’izay. Raha araka ny fanazavana dia ankisonaratra (court-circuit) no nitarika ny afo. Tapaka tanteraka ihany koa ny herinaratra teo amin’ny manodidina iny alina iny noho ny fepetra tsy maintsy noraisina mba tsy hiparitahan’ny afo.
Nametra-pialana tsy ho mpitantana ny toeram-piantsonana Maki Andohatapenaka i Alain Rakotoarisoa na Alain Cotisse. Teny anivon'ny minisiteran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetr'andro no nametrahany izany ny 17 oktobra lasa teo. Nitranga moa izany taorian’ilay disadisa noho ny famefena ampahan-tany teny amin’ny manodidina ny tobim-piantsonana Maki, izay tsy nahafaly ireo mpitatitra ka nitarika ny fanakatonana ny Gare routière ny 13 oktobra lasa teo iny. Andrasana izay valin-tenin’ny manampahefana.
FIVORIANA MOMBA NY FIFIDIANANA
Hisy fivoriana goavana etsy amin'ny CCI Ivato amin'ny alakamisy ho avy izao momba ny fifidianana. Raha ny fantatra, ireo kandida mitaky ny hanemorana ny fifidianana sy mitsikera ny lisi-pifidianana ireto mitarika ny fivoriana ireto. Etsy an-kilany anefa, nihizingizina fatratra ny praiminisitra fa tsy maintsy hisy ny fifidianana ary tsy hihemotra mihitsy. Ny kandidà lehibe rehetra dia efa samy nanapa-kevitra fa tsy maintsy hatao ny fifidianana. Iretsy maromaro izay tsy tena vonona ihany no mitady tetika hanemorana izany.
Naka olon-tsotra amin’izay ny BIANCO hanao famotorana fa tsy niantehatra amin'ny polisy sy ny zandary irery intsony. Andramana avokoa ny fomba rehetra ahafahana miady amin'ny kolikoly, hoy ny tale jeneraly bianco. Miisa 31 ireo sivily nofanina ho mpanao famotorana tany Moramanga. Hafahafa ihany ilay fanandramana satria eran-tany dia olona nahavita fianianana ary koa manana fahaizana manokana mombany “police judiciaire” izay vao afaka manao fanadihadiana.
VOTSOTRA IREO TAKALON’AINA
Votsotra ihany ireo zaza sy ny mpitaiza azy, tany Ambatofinandrahana. Nandoa vola mitentina 40 tapitrisa ariary ny fianakavian’ireo olona nalain’ny jiolahy an-keriny ireo. Tsy sahy nametraka fitoriana ny havan’ireo olona noho ny tahotra sao dia hovonoin’ny jiolahy izy mianaka. Hatreto izany dia ny karana sy ny tambanivohitra no lasa mitovy ankehitriny manoloana ny fakàna an-keriny. Izy ireo hatrany no lasa mizaka ny vokatr’ity asan-jiolahy izay vaovao ihany ho an’ny tontolo ambanivohitra.
RANOM-BOANKAZO NIVADIKA POIZINA
Olona roa no naiditra hopitaly rehefa nisakafo tao amin’nytoeram-pisakafoanana Thailandais iray etsy Ankorahotra. Izany dia noho ny fanomezan’ilay toeram-pisakafoanana ranom-boankazo izay efa lany daty ireo olona. Avy hatrany dia novakian’ny tompon’ilay hotely ny tavoahangy raha saika haka sary ireo narary mba hatao porofo. Fanambaniana tanteraka ny mpanjifa ary indrindra koa ny gasy no zava-niseho. Baranahiny tanteraka ny sehatra toy itony satria tsy mba misy ny fanaraha-maso matotra avy amin’ny fanjakana.
Raikitra ny fanafihana tao anaty fiarakaretsaka tetsy Ampasika-Itaosy. Nambanana sabatra ny mpamily sy ny mpandeha dia nalaina ny entana toy ny ordinateur portable, ny finday ary ny vola. Telo lahy izy ireo no nanatontosa ny fanafihana. Sendra nifanehatra tamin’ny zandary nanao fisafoana anefa ka mba voasambotra teo ihany ny iray raha tafaporitsaka tao anaty haizina sy ny orana ny roa hafa.